Duufaannada korantada: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Waa macquul inaad waligaa la kulantay onkod laakiin aadan hubin sida ay wax udhaceen ama waxyeelada ay keeni karto. Marka loo eego qeexitaanka Maamulka Badweynta iyo Cimilada Qaranka (NOAA, oo loo soo gaabiyay Ingiriis), onkodku waa mid ay soo saarto a nooca daruurta cumulonimbus oo ay la socdaan hillaac iyo onkod.
Qodobkaan waxaan si qoto dheer ugu sharaxeynaa wax walba oo ku saabsan onkod. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u samaysan yihiin iyo dhibaatada ay u geysan karaan? Sii wad aqriska wax walbana waad ka baran doontaa 🙂
1 Dabeylaha korantada
2 Sameynta onkodka
3 Noocyada onkodka
4 Hillaac onkodka
5 Saamayn xun iyo waxyeelo ay geysteen
Noocyada duufaantu waa ifafaalooyinka saadaasha hawada aad u xiiso badan oo ay ka baqeen dad badan. Tani waa sababta oo ah waxay leedahay awood aad u sarreeya oo khatar badan waxayna keentaa buuq badan oo aan fiicnayn. Guud ahaan, marka ay onkod dhacdo waxaa la socda roobab culus oo aad u tiro badan. Waxay la yimaadaan onkod xoog leh laakiin muddo gaaban socday. Waxa kale oo jira kuwa laga dhex arko cirka magaalada oo dhan.
Markuu qofku si dhow u fiiriyo onkodka, wuxuu arki karaa inay u eg tahay xamaamad. Tani waa sababta oo ah daruuraha sare waa fidsan yihiin. Waana in duufaantu ay ka dhici karto meel kasta oo adduunka ah, illaa iyo inta ay jiraan xaalado kuleyl iyo huur oo lama huraan ah.
Dhinaca kale waxaa jira waxa loo yaqaan duufaan daran. Tani waa, dhacdo la mid ah tan lagu sharraxay, laakiin ay weheliso soo dhaca roob dhagaxyaale oo cabbirkoodu gaarayo ilaa hal inji ama ka weyn. Dheeraad ah, Waxaa jira dabeylo dabeylo ka badan 92,5 km / saacaddii. Mararka qaar waxaad arki kartaa wax soo saarka duufaan taasi waxay ku dambaysaa wax kasta oo jidkeeda ku xumaada.
Duufaanadan ayaa ah kuwa soo noqnoqda xilliga gu'ga iyo bilaha xagaaga marka fiidkii la gaaro ama habeennada.
Dhacdooyinka saadaasha hawada ee baaxaddaan leh si ay u sameysmaan, qoyaan badan, hawo soo kacaysa oo aan xasillooneyn, iyo farsamo qaadis hawada riixeysa ayaa loo baahan yahay. Nidaamka ay u samaysan tahay waa sidan soo socota:
Marka horeba, waa inuu jiraa hawo kulul oo ay ka buuxaan uumiga biyaha.
Hawadaas kulul waxay bilaabataa inay soo baxdo, laakiin way ka sii kululaanaysaa hawada hareerahaaga ah.
Markay kacdo, kuleylka ay leedahay waxaa looga wareejiyaa dhulka dushiisa heerarka ugu sarreeya ee jawiga. Uumiga biyuhu wuu qabowjiyaa, isku soo ururaa waana marka daruurtu bilaabmaan inay samaysmaan.
Qaybta sare ee daruurtu way ka qabowsan tahay qaybta hoose, sidaa darteed uumiga biyaha ee dusha sare wuxuu isu beddelaa jajab baraf oo isdaba jooga ah.
Kuleylka ku dhex jira daruurtu waxay bilaabaan inay sii kordhaan oo xitaa uumiga ayaa la abuuraa. Isla mar ahaantaana, dabayl qabow ayaa ka soo kacaysa daruurta dusheeda.
Ugu dambeyntiina, qaybo baraf ah oo daruurta ku dhex jira ayaa dabayshu kor iyo hoos u qarisaa. Isku dhaca qaybaha ayaa ah waxa soo saara dhimbiillada booda oo abuuraya gobollo leh koronto weyn. Waa tan markii dambe u muuqata sidii danab hillaac ah.
Sababtoo ah ma jiro hal nooc oo onkodka oo keliya ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo kuxiran tababarkooda iyo koorsadooda. Waxaan halkan ku soo koobaynaa noocyada:
Unug fudud. Kuwani waa duufaanno daciif ah oo muddo gaaban qaadanaya. Waxay soo saari karaan roobab culus iyo hillaac.
Multicellular. Waxay ka kooban yihiin laba ama in ka badan oo unugyo ah. Waxay awood u leedahay inay qaadato dhowr saacadood waxayna soo saari kartaa roobab culus oo ay weheliyaan roobdhagaxyo, dabaylo xoog leh, duufaano gaagaaban iyo xitaa daadadka.
Khadka xarkaha. Waa xariiq adag ama udhow duufaano firfircoon oo ay la socdaan roobab culus iyo dabeylo xoog leh oo dabeylo wata. Waa inta u dhexeysa 10 iyo 20 mayl ballaaran (16-32.1 kiilomitir).
Dhawaaqa arc. Nooca noocan ah ee duufaantu waxay ku saleysan tahay echo radar echo qaloocsan oo qafiif ah. Dabeylo toosan ayaa ka kora bartamaha.
Supercell. Unuggaan wuxuu hayaa gobol dhan oo joogto ah oo casriyeyn ah. Waxay socotaa in ka badan saacad waxayna ka hor mari kartaa duufaanno waaweyn oo xoog badan.
Mid ka mid ah ifafaalaha dhaca xilliyada duufaanta waa hillaac. Hillaacdu waa wax aan ka badnayn dheecaanno koronto oo gaaban oo ka dhaca daruuraha gudihiisa, inta u dhexeysa daruurta iyo daruurta, ama daruurta illaa barta dhulka. Si dogobku dhulka ugu garaaco, waa in kor loo qaadaa oo ay jirtaa curiye ka dhex muuqda inta kale.
Hillaaca xooggiisa ayaa kun jeer ka sarreeya kan hadda aan ku haysanno guriga. Haddii aan karti u leenahay in koronto nalagu xiro marka fiilada fiilooyinku ay ka baxaan, qiyaas waxa ay danab sameyn karto. Sikastaba, waxaa jira kiisas badan oo dad ay ku dhacday biriqda ay ka badbaadaan. Sababtuna waxay tahay muddada dogobku aad buu u yar yahay, sidaa darteed xooggeedu ma ahan mid dilaa ah.
Waa fallaadho awood u leh inay faafiyaan qiyaastii 15.000 kilomitir saacaddii oo cabirkooduna yahay kilomitir dherer ah. Ilaa shan kiilomitir danab dheereeya ayaa lagu duubay duufaano aad u waaweyn.
Dhanka kale, waxaan leenahay onkod. Onkod waa qaraxa sababa dheecaan koronto oo awood u leh inuu ruxmo muddo dheer maxaa yeelay dhawaaqyada ka dhex dhaca daruuraha, dhulka iyo buuraha dhexdooda. Markay daruuruhu sii ballaaranaadaan oo sii cufnaadaan, dhawaaqa dhawaaqa dhexdooda ayaa ka sii weynaan doona.
Sababtoo ah hillaacu si dhakhso leh ayuu u socdaa xawaaraha iftiinka awgiis, waxaan aragnaa hillaaca ka hor intaanan maqal onkodka. Si kastaba ha noqotee, tani waxay dhacdaa isku mar.
Saamayn xun iyo waxyeelo ay geysteen
Nooca noocan ah ee saadaasha hawada ayaa sababa dhaawacyo fara badan. Haddii ay sii jiraan muddo dheer waxay u horseedi karaan daadad. Dabaylaha keligood ayaa awood u leh inay dumiyaan geedaha iyo walxaha kale ee waaweyn. Marar badan, korontada ayaa u go'da sababo la xiriira dhaawac soo gaaray xarigga korontada.
Markay duufaannada dabaylaha wata, dhismayaasha lagu burburin karo daqiiqado yar gudahood.
Sidaad u aragto, onkodku waa ifafaalooyin aad khatar u ah oo gabbaad laga dhigto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Dabeylaha korantada
Tito Erazo dijo
Salaan, sharraxaad xiiso leh, oo ku saabsan duufaannada korantada, si kastaba ha noqotee waxaan rabaa inaan kula wadaago dalkayga Ecuador iyo gaar ahaan Manabí, oo ah gobol xeebeed, duufaanno koronto ayaa sidoo kale dhaca, iyada oo si gaar ah daruuraha u samaysmaya, aysan jirin walxaha barafka, haddii aysan ahayn in qoyaanka ay ku jiraan ay ka kooban yihiin qaybo biyo ah, oo sida aan ognahay marka ay isku ururayaan ay sameysmaan dhibco waaweyn oo soo dejiya. Waxaa macquul ah in laga helo gobolka Sierra ee dalkayga, duufaanno koronto ayaa ka dhaca, sida uu si fiican u sharraxay, maxaa yeelay waa qabow iyo haddii baraf jiro. Mahadsanid.
Jawaab Tito Erazo